LXDE: DEBIAN 10 နဲ့ MX-Linux 19 မှာဘာတွေထည့်ထားသလဲ။ | Linux မှ
LXDE အလင်းနှင့်အစာရှောင်သည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်သလောက် Xfce y အိမ်ထောင်ဖက်။ On LXDE များသောအားဖြင့်အချက်အလက်များသည်အခြားသူများနှင့်များများစားစားမရှိ။ ဥပမာ၊ နောက်ဆုံးပို့စ် အသေးစိတ်ဖော်ပြပါ LXDE၎င်းသည်ကူးယူထားသည့်မိတ္တူတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်ကကဖြစ်သည်။
ဤအချက်သည်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်နည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည် GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှုများ ဒါကပါဝင်သည် ပုံမှန် Desktop Environment။ ထို့ကြောင့်၊ ဤစာစောင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးအာရုံစိုက်မည် ဒါဟာဘာလဲ? y သင်မည်သို့တပ်ဆင်မည်နည်း။။ သင်တန်း၏လက်ရှိအလေးပေး DEBIAN GNU / Linux metadistribution၎င်း၏လတ်တလော၌တည်၏ ဗားရှင်း, အ အရေအတွက်အား 10, ကုဒ်နာမည် buster။ ဘယ်လက်ရှိလည်းများအတွက်အခြေခံသည် Distro ပါ MX-Linux 19 (Ugly Duckling).
တရားဝင်သတင်းအချက်အလက်များကို ကိုးကား၍ အောက်ပါတို့ကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
"LXDE ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ပေါ့ပါးသော X11 Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်၎င်းသည်မြန်ပြီးပေါ့ပါးသော desktop environment တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်သယံဇာတအသုံးပြုမှုကိုနိမ့်ကျစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ LXDE သည် feature-rich desktop ဖြစ်သော်လည်း RAM နှင့် CPU နည်းသည်။ အခြားအကြီးအကျယ်ပေါင်းစည်းထားသည့်စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများနှင့်မတူဘဲ LXDE သည် modular ဖြစ်ရန်ကြိုးပမ်းသောကြောင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည်မှီခိုမှုအနည်းငယ်နှင့်လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် LXDE ကိုကွဲပြားသောဖြန့်ဝေမှုများနှင့်ပလက်ဖောင်းများအားလွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ” တရားဝင် LXDE ဝီကီ
1 အားလုံး LXDE အကြောင်း
အားလုံး LXDE အကြောင်း
LXDE ယခုနှစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြန့်ချိခဲ့သည် 2006 ထိုင်ဝမ်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်အားဖြင့် Hong Jen ရီ ပြီးသွားတဲ့အခါ PCManFM, ပထမ ဦး ဆုံး desktop ကို module ကို။ ထိုအခါအပြည့်အဝ desktop ကို LXDE၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အစေခံ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူ အနိမ့်စွမ်းအင်နှင့်အရင်းအမြစ်စားသုံးဖြန့်ဝေ.
လက်ရှိအဘို့အသွား 0.8 ဗားရှင်း (တည်ငြိမ်သော) ။
LXDE ကတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည် တရားဝင် repositories အများအပြားအတွက် GNU / Linux DistrosDEBIAN, Ubuntu နှင့် Fedora ကဲ့သို့သော အချို့မှာအရင်းအမြစ်နည်းသောသုံးစွဲမှုအဖွဲ့များကိုအာရုံစိုက်သည့်အခါပုံမှန်အားဖြင့်ယူဆောင်လာကြသည်။
El လျှောက်လွှာဂေဟစနစ် ဇာတိ LXDE ၎င်းကိုပရိုဂရမ်များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအောက်ပါတို့သည်အထင်ရှားဆုံးသို့မဟုတ်လူသိအများဆုံးဖြစ်သည်။ PCManFM (ဖိုင်မန်နေဂျာ), Leafpad (စာသားတည်းဖြတ်သူ), GPicView (Image Viewer), များစွာသောအခြားအကြား။
LXDE လုပ်ထားတယ် GTK + 2။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုခေါ်အပြိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိပါတယ် LXQT, ငါတို့အခြားပို့စ်တွင်အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
မှတ်စု: LXQT အဆိုပါဖြစ်ပါသည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် လက်ရှိအားဖြင့်ထုတ်သယ်ဆောင် Hong Jen ရီ နှင့်၎င်း၏ developer များအသိုင်းအဝိုင်း, ဒါပေမယ့်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုစွန့်လွှတ်ကြပြီမဟုတ် LXDEသူတို့က port ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်အဖြစ် GTK +3နှင့်သဟဇာတဘို့ အဆိုပါ Gnome3 ပတ်ဝန်းကျင်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သယ်ဆောင်ပုံ QT5 နှင့် KDE မူဘောင်များ5နှင့် LXQT နှင့်သဟဇာတအောင်မြင်ရန် KDE Plasma ပတ်ဝန်းကျင်.
၎င်းသည် Desktop Environment တစ်ခုဖြစ်သည် အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အနိမ့်စားသုံးမှု။ ၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခံရအတွက်တည်ရှိသည် ပေါ့ပါး။ အခြားသူများထက် CPU နှင့် RAM နည်းသည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအကျိုး။
၎င်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအသိုင်းအဝိုင်း လက်ရှိရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများရရှိရန်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်တရားဝင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်လုပ်ဆောင်နေသည် GTK + 3.
အတူပါလာသည် မျက်စိ - ဖမ်းယူ interface ကို ဒါပေမယ့်ရိုးရာအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ။
၎င်းတွင်အပြုသဘောဆောင်သောလက္ခဏာများရှိသည် ဘာသာပေါင်းစုံပံ့ပိုးမှုtabbed file browsing ကဲ့သို့သော standard hotkeys များနှင့်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖန်တီးခြင်း။
ယခု LXDE ကထောက်ပံ့သည် Linux ကို။ ဒါကြောင့်လည်းအပေါ်စမ်းသပ်ပြီးထားပြီးပေမယ့် FreeBSD။ ဒါကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်အပေါ်အခြေခံပြီးမည်သည့်စနစ်နီးပါးကထောက်ခံသည် Unix က.
၎င်းသည်မည်သည့် desktop ပေါ်တွင်မဆို၊ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင်မူတည်သည် Desktop Environment ကိုအမှီအခိုကင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည် LXDE.
၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုဖြစ်ပါတယ် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ချိန်ညှိ မှထွက် freedesktop.org.
သူ့မှာကိုယ်ပိုင်မန်နေဂျာမရှိပါ, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ကများသောအားဖြင့်အသုံးပြုသည် Openbox.
၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ် GTK2 ဒါပေမယ့်တစ် ဦး စမ်းသပ်ဗားရှင်းရှိပါတယ် LXDE ပေါ်အခြေခံကာ GTK + 3, အသုံးပြုသူအုပ်စုထံမှထောက်ခံမှုနှင့်အတူဖန်တီးခဲ့သည် မုတ် (lxde-gtk3).
ဒါဟာအပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ် နှင့်သင်၏ရောက်ရှိမထားပါဘူး ပထမရင့်ကျက်သော version (၁.၀) သို့သော်၎င်း၏ရပ်ရွာလူထုသည်နေ့စဉ်တည်ငြိမ်သော၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကြောင့်ကြီးထွားလာသည်။
အကြံပြုသည် ပုံမှန်ထက်အတွေ့အကြုံပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်ရှိသူအသုံးပြုသူများအတွက်အရာအားလုံးနီးကပ်လွန်းသည်မဟုတ်, နှင့်၎င်း၏အလားအလာညှစ်ဖို့တစ် ဦး လိုအပ်သည် Linux ကောင်းကောင်း command.
သင်ဘယ်နေရာကိုသွားနိုင်သည် လက်တွေ့ကျသောတရားဝင်ကဏ္sectionsများထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် ဘလော့၊ ဝီကီနှင့်ဖိုရမ်အခြားသူများအကြား။ အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ရန်အောက်ပါလင့်ခ်များကိုလည်းရရှိနိုင်သည် LXDE:
ရွေးပါ LXDE Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် နှင့်အခြား utility ကိုသို့မဟုတ်အပိုဆောင်း packages များအစုံ။
မှတ်စု: အပေါ်မှာအခြေခံပြီး Desktop Environment ကိုလည်း install လုပ်နိုင်ပါတယ် LXDE အထုပ်ကိုအစားထိုးခြင်းဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူ lxde အားဖြင့် lxde-core.
ကိုရွေးပြီး Reboot လုပ်ပါ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် LXDEတစ် ဦး ထက်ပိုသောရှိခြင်း၏အမှု၌ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် installed နှင့်မရွေးချယ်ဘဲလျက် Login Manager ldxe-session.
သတိရပါ၊ ပဉ္စမ post အကြောင်းကိုစီးရီး၏ GNU / Linux Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ။ ယခင်သူများအကြောင်းကိုခဲ့ကြသည် GNOME, KDE Plasma, Xfce, သစ်ကြမ်းပိုး y အိမ်ထောင်ဖက်. နောက်ဆုံးတ ဦး တည်းအကြောင်းကိုဖြစ်လိမ့်မည်နေစဉ် LXQT ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Entorno de Escritorio» ၏နာမအားဖြင့်လူသိများ «LXDE», အရာရုံကဲ့သို့အပေါ့ဆုံးနှင့်အရိုးရှင်းဆုံး၏တ ဦး တည်းစဉ်းစားသည် Xfce, ရိုးရာစတိုင်နှင့်ကမ္ဘာ၏အတွင်း, ဇာပလီကေးရှင်းသေးငယ်နှင့် incipient အစုံနှင့်အတူ «Distribuciones GNU/Linux»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » LXDE: DEBIAN 10 နဲ့ MX-Linux 19 မှာဘာတွေထည့်ထားသလဲ။
ကျွန်ုပ်တွင် Debian 10 ကို LXDE နှင့် XFCE ထည့်သွင်းထားသည်။ WPS Office 11.1.0.9080 ရုံးအစုံ၏ဗားရှင်းသစ် LXDE တွင်မစတင်သော်လည်း၊ XFCE တွင်မူယခင်ဗားရှင်းသည် LXDE တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ မည်သူမဆိုဤပြproblemနာနှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသိသလား
LXQT: ၎င်းသည် DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 တွင်မည်သို့ရှိသနည်း။